12 | July | 2008 | San Oo Aung's Weblog
Immigration grafta‘national security problem’
Posted on July 12, 2008 by sanooaung
Immigration grafta‘national security problem’: ACA chief
The Anti-Corruption Agency (ACA) said today rampant corruption at the immigration department wasanational security problem following the arrest of seven people.
Among those detained wasatop immigration official who allegedly issued visas to foreign workers in exchange for money, reports said.
Officials from ACA have seized cash totaling more than RM500,000 ringgit.
ACA director-general Ahmad Said Hamdan said the watchdog got wind of the scam two months ago following tip offs from the public.
“It goes right to the top. It involves the public, foreigners, government officers and also syndicates.
If SPDC refused we need to revolt and fight (in Burmese)
If SPDC refused we need to revolt and fight
မြန်မာလူထုက အမျိုးသားရေးစိတ်ဒဏ်သင့်တဲ့ အနာ သုံးခါရှိခဲ့ပါပြီ။ ဆရာကြီးရွေဥဒေါင်းစကားနဲ့ ပြောရင်တော့ အသည်းနှလုံးမှာ ဆူးကြီးပေါက်ခဲ့သလိုခံစားခဲ့ရတာ။ ဒေါ်မာမာအေးစကားနဲ့ ပြောရင်တော့ အသည်းနာကမ္ဘာမကြေနာ- မဟာနာကျည်းမှုကြီး ။ ဒါတွေကတော့
၁- ၈၈လှုပ်ရှားမှုကြီးအနိမ်နင်းခံရပြီးနောက်၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အကောင်အထည်မပေါ်လာတာ။
၂- ၂၀၀၇ခုနစ် စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေးက တောင်းဆိုချက်ဘာတခုမှမရပဲ ရက်ရက်စက်စက်နိမ်နင်းခံခဲ့ရတာ။
၃- နာဂစ်မုန်းတိုင်း ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် နိင်ငံတကာအကူညီတွေကိုစစ်အစိုးရက ငြင်းဆန်ပြီး ထောက်ပံမှုတွေကိုအလုံအလောက်မလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာ ။ ဒီအပေါ်မှာ လူထုက စိတ်ဒဏ်သင့်ခဲ့တယ်။ ဒီစိတ်ဓံသင့်မှုက အလွန် အန္တရယ်ရှိတယ်။ လူထုက တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားစေတတ်တယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားစေခဲ့တယ်။ ဒီအနာကြီးကိုဖြေဖျောက်ဖို့ အတွက် လူထုကို မျော်လင့်ချက်တွေပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒါကတော့ လူထုတိုက်ပွဲတွေ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရမယ်။ နအဖ ရဲ့စီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးက ၁၉၈၈ ခုနစ် မတ်လ ၁၆ ရက် တံတားနီအရေးခင်မှာ ကျနော်တို့ကို မဆလ စစ်အစိုးရက နိမ်နင်းခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ တူတယ်။ တံတားနီကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ ကျောင်းသား တရာကျော်အသတ်ခံရတယ်။ သုံးထောင်နီးပါးအဖမ်းခံရတယ်။ ငါးရာကျော်ကျောင်းထုတ်ခံရတယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုလုံထိမ်းကရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့် ကျောင်းသားထုအတွင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်သင့်သွားနိင်တယ်။ အကြောက်လွန်သွားနိင်တယ်။ စိတ်အားငယ်မှုတွေဖြစ်လာနိင်တယ်။
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေက ဒီအခြေအနေကို အရောက်မခံဖို့ လိုတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ 
သိမ်ကြီးဈေး စီရုံကို မီးတင်ရှို့ ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ကျောင်းသားထုနဲ့ လူထုက စိတ်အားပြန်လည်တက်ကြွလာတယ်။ ငါတို့ ကိုမတရားလုပ်ခြင်တိုင်းလုပ်လို့ မရဘူး။ ငါတို့ ထဲမှာ မတရားမှုကိုရဲရဲရင့်ရင့် ဆန်ကျင်မဲ့ အင်အားစုတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလို့ ပဲ။ အခု အခြေအနေကြီးကိုကျနော်တို့ မကြိုက်ဘူး။ လူထုထဲမှာ ကျဆင်းနေတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ပြန်လည်တက်ကြွလာနိင်ဖို့ အတွက် တချို့ ပြစ်မှတ်တွေကို ကျနော်တို့ ရှာဖွေ တိုက်ခိုက်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဒေါင့်တနေရာမှာတော့ မတရားမှုတွေကိုလက်တုန်ပြန်မဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ရဲရဲ ၀ံဝံပြသကြပါစို့ ။
Posted by Moethee Zun
Filed under: Blogging, Burma, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: Revolution, SPDC |	Leaveacomment »
Plight of Burmese Muslim victims of Nergis cyclone (in Burmese)
၂၀၀၇ခုနစ်စက်တင်ဘာသံဃာလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာမူစလင်ဘာသာဝင်များကတက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသော်ငြားလည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မူစလင်တွေကို မြန်မာဗုဒဘာသာ အလျူရှင်တွေက သိပ်ပြီးမလှုတန်းလိုကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မူစလင်တွေ က ကွမ်းခြံကုန်း ၊ခရမ်းလေးနဲ့ အခြားရွာတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ ကားလမ်းဘေးကိုထွက်ပြီး တောင်းနေပေမဲ့အလူရှင်တွေက သူတို့ နေရာတွေကိုကျော်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုဇာဂနာကိုအဖမ်းခံရပြီးနောက် မှာဒီလို အခြေအနေတွေကို စတင်ကြားလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ လူမှုရေးအသင်းတွေအနေနဲ့ဘာသာမခွဲခြားပဲ ကူညီကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားရေးနဲ့ မြန်မာ့ဘာသာရေးအယူအဆများကြောင့် ကျနော်တို့ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါတွေကိုသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်။ ဗုဒမြတ်စွာဘုရားရဲ စစ်မှန်တဲ့တရားအတိုင်းကျင့်သုံးကြပါ။ ဒီလိုကျင့်သုံးရင်ဘေးဒုက္ခဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဒုက္ခရောက်သူတိုင်းကိုလူမျိုး၊ဘာသာမခွဲခြားပဲကူညီကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, Myanmar, Politics | Tagged: Buddhists, Burmese Muslims, Nergis |	Leaveacomment »
China and Russia castrated UNSC with the veto on Zimbabwe sanctions
China and Russia castrated UNSC
with the veto on Zimbabwe sanctions
Zimbabwe’s president Robert Mugabe casts his vote atapolling station in Harare in June. Photograph: EPA
British and US efforts to apply punitive pressure on Robert Mugabe were abruptly undermined last night when Russia and China vetoedaUN security council resolution seeking sanctions against Zimbabwe.
The resolution, calling for an arms embargo, and financial and travel restrictions on Mugabe and 13 other regime leaders, was backed by nine nations but foundered on the vetoes of the two permanent members. The arms embargo would have affected Russian and Chinese weapons exporters.
The outcome at UN headquarters in New York will raise questions about the international community’s ability to act decisively against Mugabe and his Zanu-PF ringleaders who orchestrated the violence that disfigured Zimbabwe’s election run-off last month. Mugabe was declared the victor after his opponent, Morgan Tsvangirai, pulled out citing the absurdity of holdingavote while dozens of opposition members were being beaten, arrested and killed.
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: Burma, castrated, eunuch, UN, UNSC, Zimbabwe |	Leaveacomment »
ILO condemns May Day activists’ appeal denial
Jul 11, 2008 (DVB)–The International Labour Organisation has spoken out against the Burmese Supreme Court’s decision to deny the appeal of six activists against their lengthy prison sentences.
Inastatement issued today, the ILO said the court’s rejection of the appeal was “extremely disappointing” and ran counter to the government’s obligations under the ILO convention on freedom of association.
Thurein Aung, Wai Linn, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Min and Myo Min were sentenced to between 20 and 28 years’ imprisonment after attending May Day celebrations at the American Centre in Rangoon in 2007.
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: ILO |	Leaveacomment »
What if Asean leaders had to live in Myanmar?
International by Nathaniel Tan
What if Wan Hamidi (NST) had to live in Burma?
I have to say I was disgusted by his piece in NST today. Disgusted.
Before that, related breaking news via Malaysiakini:
Southeast Asian leaders have called offabriefing by UN envoy Ibrahim Gambari on the situation in Burma after the junta objected, Malaysian Foreign Minister Syed Hamid Albar told AFP Monday.
“It has been cancelled because I think Myanmar feels that they deal with the UN and it is their own domestic matter. This evening, Myanmar objected and we base our decisions on consensus.”
“If they want any briefing, Myanmar will do the briefing,” Syed Hamid said.
:| Yes, I’m sure those generals will be all “Yar… we would like to brief you… that we are umm… are horrible monsters..”
You can’t even haveastupid briefing because of the generals? I really hate to sound vulgar, but next you’ll be sucking their…